I-Flash Websites ze-Intanethi - Iinkonzo kunye ne-Cons-Web-Design / HTML
Kwakukho ixesha kwixesha elingekho kude apho i-Flash ilawulwa kwiWebhu. IiSayithi ziqhutywe zize zikhutshwe ngefowuni kunye nesandi kwizinto ezidla ngokubhekiselele kwizinto ezibhekiselele kuzo "iindwendwe". Kwaye emva koko kwakukho izinto ezintle kunye nokungonakali kokusebenzisa i-Flash kwisayithi, kwaye namhlanje ezo zinto zingenakuze ziphelise le teknoloji zisetyenziswe kwiziza.
Ekuqaleni, i-Flash yayiyikhnoloji ekhangayo kakhulu esetyenziselwa ukongeza ukusebenzisana kunye nemifanekiso eqingqiweyo kwiwebhusayithi.
Ukufunda ukubhala iindidi ezifayo kunye neefom kwi-Flash kunokuba nzima kunye nokuchitha ixesha, ngoko-ke abaphuhlisi ababazi i-Flash bahlala bekhuthazwa ukuyisebenzisa kuyo yonke imeko. Kodwa njengazo zonke i-teknoloji, i-Flash inezintluzo ezithile kubafundi abaninzi kunye nokubeka isayithi kwi-Flash ingaba yingozi kwesosiza kunokuba idwebe. Sekunjalo, iinzuzo ze-Flash epholile yabangela ukuba abantu abaninzi bamkele ukungaphumeleli kwaye basebenzise nantoni na.
Ukuba isayithi lakho langoku lisasebenzisa i-Flash, kufuneka ukwazi zonke iinkalo ezintle ze-Flash kunye neengxaki. Oku, kudibaniswe nolwazi lwabaxumi bakho, kufuneka kukuncede ukuba wenze isigqibo sokuba ngaba ufuna ukusetyenziswa kweli lixesha elidlulileyo kwi-design website.
I-Flash iyonke kodwa ifile kwiWebhu. Isigqibo se-Apple sokususa inkxaso yeFlazi kwi-system yabo yokusebenza iOS ibonisa i-knell yokufa yale teknoloji. I-Flash yazama ukuxhoma kwithuba elithile, kodwa ekugqibeleni, i-movie kwi-computer yeselula kunye nokuhanjelwa kwewebhu kwashiya iFlazi kunye neentlobo zayo ezidangayo ngaphandle.
I-Flash isasetyenziselwa kwezinye iisayithi, kwaye isasetyenziselwa ukushicilela ividiyo kumaxesha amaninzi. Kukho neenkampani ezininzi eziye zavelisa isicelo esinamandla kunye neFlabathi kwaye ziyaqhubeka zisebenzisa ezo zicelo kunokuba ziphuhliswe ngokusetyenziswa kwezinye iilwimi kunye neeplani. Sekunjalo, ngelixa kukho ezinye i-Flash ukuphuma apho, iintsuku zayo zenziwa.
Ikhoyo kunye nekamva kwiWebhu ayibonakali ukuba inendawo yeFlash, kwaye akufanele ifayili yakho.
Ukusebenzisa okanye ukungasebenzisi i-Flash kwiwebhusayithi kunokubangela iingxaki ezinkulu kwisayithi. Ukuba uyakha iwebhsayithi eyenziwa yiFlawu ifanelekile, ngoko ungasebenzisi i-Flash ingabaqhubi abafundi. Kodwa ukwakha isayithi kwi-Flash nje kuba unako ukuphazamisa indlela abathengi bakho abasebenzisana ngayo nesayithi yakho, ingaba bayifumana isayithi kwiinjini zokukhangela, nokuba kufumaneka njani kwaye kusetyenziswe indawo yakho.
I-Flash iyisityebi esinamandla, kodwa njengazo zonke izixhobo kwibhokisi lebhokisi yonxibelelwano lewebhu, akufanele isetyenziswe ukulungisa yonke imeko. Ezinye iingxaki zichongwa kangcono nge-Flash, kwaye ezinye azikho. Ukuba uyazi ukuba usebenzisa i-Flash ngokufanelekileyo, unokwandisa ukujonga kwekhasi lakho kunye nabathengi.
Inqaku loqobo loJennifer Krynin. Ehlelwe nguJeremy Girard ngomhla we-10 / 4/17
Izizathu zokusebenzisa i-Flash
Ukuhambelanisa ukuhamba kweembambano
I-Flash ixhaswa kakuhle kwizinto ezinjenge-95-98% yezikhangeli zewebhu apha, kwaye ukuba wakha isayithi okanye isicelo kwi-Flash, uyazi ukuba iya kujongwa ngokuchanekileyo ngabani na onokwi-Flash plugin. Inkqubo yokusebenza kunye nesiphequluli esizimeleyo.
I-Flash yasekuqaleni yayisetyenziswa ngokuyinhloko njengethuluzi lokuzonwabisa, kwaye yile nto efanelekileyo kakhulu. Kulula ukudala imifanekiso kwi-Flash, kwaye kulula ukuyijonga.
Ividiyo isebenza kakuhle kwizicelo ze-Flash kuba ayifuni i-plugin exhomekeke kwi-OS njenge-QuickTime okanye iMediaPlayer.
Imidlalo iya kulonwaba, kwaye imidlalo ye-Flash ayinayo imiba yenkxaso yesibhajethi ye-Ajax ukukhawulelana kwamanqwanqwa emidlalo yecala le-server ebhaliweyo kwi-CGI.
Imifanekiso yemifanekiso ingabonakala ilula kwaye ikhangeleka kwaye i-Flash ivumela abaphuhlisi ukuba benze izicelo kunye nemigca ehamba phambili efuna ukuba umthengi abe nesixhobo sokubonisa imifanekiso esekelwe kwi-drive yabo enzima.
Ungeze, kakuhle, ukhangela kwisayithi
Ukutshintshwa kwesithombe kwiifom ezikhethekileyo
Abaqulunqi bewebhu abadinga intsapho ekhethekileyo yohlobo lwefayile kwi-Web designs yabo bangasebenzisa indlela yokubuyisela umfanekiso ebizwa ngokuba yiSIFR (okanye i-Scalable Inman Flash Replacement) efaka indawo yombhalo ekwakheni nge-Flash ukufumana amacwecwe athile.
Izicelo zeFlay ziyakwenza izenzo zesikripthi, ukuqokelela idatha, kwaye yenza ezininzi izinto ezifanayo kunye neempendulo zecandelo le-server.
Imiba yokusebenzisa i-Flash
I-Bandwidth kunye nokukhawuleza kweMida
Ngaphandle kokuba umyili usebenza kanzima ukulungiselela i-Flash ezininzi izicelo ze-Flash kunye neewebhsayithi zinokuba zikhulu kakhulu kwaye ziphuze ukukhuphela. Kwiimeko ezininzi, i-Flash yonkcukacha kufuneka ilandwe ngaphambi kokuba isetyenziswe. Kwaye nangona kunokwenzeka ukongeza kwimifanekiso yokubala kunye nezinye iimpawu ukwenzela ukuba ixesha lihambe ngokukhawuleza, abantu abaninzi abasayi kulinda.
Ukukwazi ukukhubazeka kungaphumeleli
Enye yezona zibhobho ezibalulekileyo kwi-Web browser iskrini yangasemva. Isetyenziswa lonke ixesha ngabantu abaninzi abaphengulula iWebhu. Kodwa indawo ye-Flash iyasusa loo msebenzi. Xa umthengi ehlasela inkinobho yangemva emva kokucoca ngokukrakra kwisayithi ye-Flash, uyabuyiselwa kwiwebhusayithi ababeyiyo ngaphambi kokuba batyelele indawo yakho. Emva koko ukuba babuyele kwiSayithi yakho yeFlabathi, kufuneka bahlaziye kwakhona apho bahlala khona. Abanye abantu banokuba bazimisele ukwenza umsebenzi wabo kabini, kodwa abaninzi banako.
Ukufikeleleka nako kuphazamiseka
Ngenxa yokuba ezininzi ii-Flash zisekelwe kwimifanekiso, kwaye ngokungekho nto eninzi itekisi engafanelekanga, inokuba nzima okanye ayinakwenzeka ukuba umfundi wekrini afunde.
Iinjongo zophando azikwazi ukuzifunda nokuba
Iinjongo ze-injini zosesho zininzi njengabafundi bekrini, abakwazi ukuhambisa imifanekiso. Ngaphezulu, abaninzi babo banenkathazo yokulandela izixhumanisi ezingekho ziqulatho eziqhelekileyo ze-HTML - kwaye unxibelelwano oluninzi kwi-Flash alukho kwi-HTML - baseBrazil. Ngenxa yoko, abaninzi abaphuculi be-Flash banenkinga enzima kakhulu ukufumana ii-Flash zabo ukuba zibekwe phezulu kwiinjinjini zokukhangela. Enyanisweni, ezininzi ii-Flash ezenza kakuhle, yenza njalo kuba ziinguqulelo ezimbini zesayithi - enye i-Flash kunye ne-HTML enye. Kwaye kufuneka bagcine iiikopi ezimbini zewebhu.
I-Flash idinga iplagi-in
Nangona ininzi enkulu yeebhulophu zewebhu i-plug-in yangaphambili ifakwe, inyaniso kukuba i-Flash idinga iplagi-apho abanye abantu kunye neenkampani abazivumeli.
Abanye abantu abathandanga amaphepha e-Flash
Ifana nemifanekiso eqingqiweyo kunye nefayile, i-Flash iye yavelisa idumela phakathi kwabanye abathengi njengento enokucaphukisa ngaphezu kwenzuzo kwiphepha leWebhu. Oku kuyinyani ngakumbi xa i-Flash ayisebenzisi enye injongo ngaphandle kokuhlobisa iphepha - njengebhanki ephakanyisiweyo okanye iphepha le-splash. Nangona abo bathengi bengabonakali kakhulu kunabo abangakhathaliyo, bahlala benamazwi kwaye banokuthi bangabonakalisi imbono kwiziko lakho xa usebenzisa i-Flash ngokukhululeka.
Ngaba Ufanele Usebenzise I-Flash?
Nguye kuphela umyili kunye nomnini wesayithi onokuyenza eso sigqibo. I-Flash iyisisityebi esihle sokongeza imidlalo, ukupapashwa kunye nevidiyo kwiWebhsayithi yakho, kwaye ukuba ezo zinhlobo zeempawu zibalulekile, ngoko kufuneka usebenzise i-Flash.
Sebenzisa i-Flash apho iphumelela khona
Kukho amaziko amaninzi kakhulu anceda ngokusebenzisa i-Flash kuphela. Ukungaphumeleli kwi-SEO, ukufikeleleka, kunye nokwaneliseka kwabathengi kwenza kube nzima ukuba ndicebise ukusebenzisa i-Flash yonke indawo yakho. Enyanisweni, yebo iGoogle icebisa kuphela ukusebenzisa i-Flash kwiimeko ezikhethiweyo:
> Zama ukusebenzisa i-Flash kuphela apho kuyadingeka.
Ungaze usebenzise i-Flash for Navigation
Kungaba nzima ukudala ukuhamba kwe-Flash ngoba unokongeza izinto ezithandekayo, i-rollovers kunye negraphic vector usebenzisa i-Flash. Kodwa ukuhamba kuyona nto ibalulekileyo kwiphepha lakho lewebhu. Ukuba abathengi bakho abanakukwazi ukusebenzisa ukuhamba kwakho nganoma yisiphi isizathu, baya kushiya kuphela - imiba yombutho kunye nokufikeleleka kokubambisana nabo banokubamba iqela kwisakhiwo se-Flash ukuhamba.
Isikhokelo sokuqala kwiMiphakathi yamaMaya
UStephen Colbert kwiNgcaciso yeeNdlu zeNgcaciso zeNdlu
Unina kaEmily Dickinson, uEmily Norcross
Ukuloba i-Knot Ukudibanisa neNgcini yokuBamba